Ndaba: Ngwaọrụ iguzosi ike n'ezi ihe maka nchịkwa CRM gị | Martech Zone
Dịka onye na-azụ ahịa, ọ dịghị ihe na-akụda mmụọ ma na-ewe oge karịa ịnwe data na-agagharị na nsogbu metụtara data iguzosi ike n'ezi ihe.
Mmiri nwere ọrụ ngwanrọ na ngwọta nke na-enyere ụlọ ọrụ aka ịma ebe ha kwụ na data ha site na nyocha na-aga n'ihu, mkpu, yana ngwaọrụ iji dozie nsogbu data. Ruo ihe karịrị afọ iri, ọtụtụ iri puku ndị nchịkwa n'ihe karịrị mba 20 gafee ụwa tụkwasịrị obi Ndabere iji nwetaghachi iguzosi ike n'ezi ihe na data CRM ha.
Usoro nkwado sitere na:
Ndaba DemandTools - Onweghị nzukọ enweghị ihe ọ bụla na-egbochi ịchekwa nchekwa data ha nke ihe ederede na ezughi oke. Ezubere iji rụọ ọrụ na oke data data na-ekwu okwu deplication data, normalization, nhazi, ntụnyere yana mbubata na mbupụ.
Ndaba DupeBlocker - Naanị ezigbo oge ejikọtara igbochi mbiputegharị nke ndị nchịkwa Salesforce ji. Dupe / blocker bụ ngwaahịa nwanne nwaanyị nke DemandTools.
Ndaba PeopleImport - PeopleImport na-enye ihe ozo na mbubata data Salesforce na-eme ka mbipute akpaka nke usoro data na abata
Gbanwee - Email nkwenye ana achi achi na adreesị ozi-e dị na ezigbo oge na-enweghị izipu ozi.
Tags: Gbanweedata crmmbubatadatadata iguzosi ikewepụitinyechọrọonye na -eme mkpọtụnkwenye emailmbubataezi